Abuur ciyaaro Linux oo leh Godot Engine | Laga soo bilaabo Linux
Inta badan adeegsadayaasha teknolojiyadda sidoo kale waxay jecel yihiin ciyaaraha, xiisahaas, inbadan oo naga mid ah ayaa ku dar barnaamijyada. Laakiin inbadan oo inaga mid ah ayaa nafteena u dejisan hadaf dhab ah, kaas oo ah in la abuuro ciyaaro noo gaar ah, taas oo ah sababta horumarinta software-ka bilaashka ah ay ula wareegeen howsha abuurista Mashiinka Godot.
Qalabkan xoogga badan ayaa naga caawinaya kulan ku samee Linux, kaas oo la geyn karo nidaam kasta oo qalliin, iyada oo la adeegsanayo qalab bilaash ah.
1 Waa maxay Godot Engine?
2 Qalabka Godot Engine
3 Ku rakib Qalabka Godot
4 Ku rakib mashiinka Godot, oo leh iskudhafka nidaamka iyo maamulaha nooca ee Ubuntu
Waa maxay Godot Engine?
Waa codsi ah il furan y marinka iskutallaabta, oo leh astaamo horumarsan oo loogu talagalay 2D iyo 3D horumarinta ciyaarta. Mashiinka Godot wuxuu isu keenayaa qalab taxane ah oo xoog badan oo ku takhasusay abuurista ciyaaraha, taas oo fursad noo siineysa kulan ku samee Linux iyada oo aan loo baahnayn in dib loo cusbooneysiiyo giraangirta.
Waad arki kartaa oo xiri kartaa koodhka isha ee Godot Halkan, waxaa lagu bixiyaa shuruudaha aad u oggol ee MIT License. Sidoo kale gebi ahaanba waa bilaash umana baahnid nooc noocyo ah oo royalties ah.
Qalabka Godot Engine
Tifatiraha muuqaalka ee wanaagsan, oo leh qalab fara badan, oo lagu daray isdhexgal nadiif ah oo nidaamsan.
Daabacaad ciyaar toos ah oo loogu talagalay kombuyuutarka iyo mobilada.
2D iyo awoodaha tafatirka 3D.
Mishiin buuxa oo 2D ah.
Darawalka jilicsan ee jilicsan ee shilalka oo aan lahayn fiisikiska.
Soodejiyaha moodooyinka 3D ee 3DS Max, Maya, Blende, iyo kuwa kale, oo ay ku jiraan dhammaan animations.
Noocyada kala duwan ee iftiinka, oo leh meeleyn hoos ah.
Waxay u oggolaaneysaa dhammaan noocyada 2D iyo animation 3D, iyada oo ay ugu wacan tahay awooddeeda tifaftiraha animation-ka muuqaalka oo leh jadwal.
Kuu ogolaanayaa Ku dar dabeecad walxaha leh qoraallo la dhisay.
Godot wuxuu ka shaqeeyaa Linux, Windows, OS X, FreeBSD, OpenBSD iyo Haiku, wuxuu ku shaqeeyaa 32-bit iyo 64-bit, dhamaan barnaamijyada.
Waxay kuu ogolaaneysaa inaad ku wareejiso ciyaaro goobo kala duwan si fudud oo dhaqso leh, kuwa ugu muhiimsan ayaa ah
Meelaha moobiilka: macruufka, Android, BlackBerry OS.
Meelaha Desktop: Windows, OS X, Linux, BSD, Haiku.
Qalabka shabakadda: HTML5 (adoo adeegsanaya emscripten).
Waa aalad loo qaabeeyey loona abuuray in la iskaashado, sidaa darteed waxay awood u leedahay inay ku dhex milmaan nidaamyada xakamaynta nooca caanka ah (Git, Subversion, Mercurial, PlasticSCM,…).
Waxay kuu ogolaaneysaa inaad abuurto tusaalooyin muuqaal ah, taas oo ka dhigaysa wada shaqeynta si dhakhso leh oo wax ku ool ah, maadaama xubin kasta oo kooxda ka mid ah ay diiradda saari karaan muuqaalkooda. Iyadoo aan loo eegin haddii ay tahay dabeecad, dejinta, iwm ... Taasi waa, waa la oggol yahay in wax laga beddelo iyada oo aan cagaha dadka kale la marin.
Gebi ahaanba bilaash iyo bilaash.
Ku rakib Qalabka Godot
Waxaad kala soo bixi kartaa feylasha rakibidda xiriirka soo socda:
64-bit server Linux ah
Waxa kale oo aad kala soo bixi kartaa taxane ah shaybaar iyo demos ka halkan.
Ku rakib mashiinka Godot, oo leh iskudhafka nidaamka iyo maamulaha nooca ee Ubuntu
Niklas Rosenqvist wuxuu abuuray qoraal BASH ah oo soo dejinaya iskuna dhafaya mashiinka Godot Ubuntu. Waxay sidoo kale u oggolaaneysaa maareynta nooca iyo rakibidda git master.
Si aad u soo dejiso oo u socodsiiso qoraalka, fur konsol oo geli amarka soo socda:
git clone https://github.com/nsrosenqvist/godot-wrapper.git godot && cd godot && ./godot rakib
Qoraalkani wuxuu si toos ah u habeyn doonaa Mashiinkaaga Godot. Eeg dhammaan sifooyinka qoraalka ku siinayo adoo ordayagodot help.
Qalab aad u fiican oo ay tahay inaan isku dayno oo aan baranno sida loo isticmaalo, gaar ahaan sameynta ciyaaro dheeri ah oo wanaagsan oo la jaan qaada Linux.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » Ku dhisida ciyaarta Linux barnaamijka 'Godot Engine'
Shaki la'aan, waa matoor aad u wanaagsan, waa fududahay in la isticmaalo, in kasta oo ay qaadanayso xoogaa laqabsashada deegaanka marka hore, waqti kadib waxaad ogaaneysaa inaad kaliya wax ka qabaneyso oo aad diiradda saareyso caqliga (taas oo ay tahay inuu matoor kasta sameeyo ).
* Dukumiintiyada, badankood waxay ku qoran yihiin Ingiriis (taas oo aan wax badan isku murgin) laakiin wax walba ma ahan kuwo faahfaahsan sida ay tahay (gaar ahaan ka hadalka 3D, dukumiintiyadu aad ayey u liitaan), laakiin waxaan qirayaa in 6-dii bilood ee la soo dhaafay ay tahay sii ballaadhinaya oo kolba marka ka dambaysa ay fuulayso; Xitaa sidaas oo ay tahay, qodobkan xoogaa waa ay xoojiyeen bulshada, qof kastaa wuu gacan ka geystaa runtiina wuu caawiyaa haddii ay awoodaan oo badiyaa wadaagaan koodhadhyo iyada oo aan dhibaato badani jirin, ha ahaato goobta kulanka, kanaalka lagu sheekeysto waxaa ku sugan dad saaxiibtinimo leh.
* Tilmaamaha tafatiraha waxaan u maleynayaa in qoraalka uu yahay mid fudud laakiin awood badan, fududahay in la xasuusto iyo tifaftiraha wax badan ayuu caawiyaa
* Sawirada 2D way kufiican tahay, xitaa wax 2.5D ah ayaa kufiican, laakiin waxqabadka muuqaalka 3D waa dhexdhexaad-hoose; Waa la wanaajin karaa oo waxay noqoneysaa mid la aqbali karo laakiin wali waxay leedahay shaqo in la qabto (waxaan idhi waxqabadka ma aha astaamo maadama ay horumarisay, astaamo aad u fiican oo aad u wanaagsan oo loogu talagalay 2D iyo 3D), waxay hadda la shaqeynayaan Gles3, oo ah mashiinka cusub ee 3D garaafyada aad ayaa loo hagaajiyay sida lagu dhawaaqay.
Gunaanad: waa ikhtiyaar aad u fiican markaad rabto inaad horumariso ciyaaro ama codsiyo badan oo iskood kuu ilaaliya madax xanuun, intaad taqaanid Ingiriisiga (ugu yaraan ugu yaraan) oo aad ka warqabto wada sheekaysiga iyo golayaasha.
Jawaab Juan Quiroga
Waxaa jira dukumiinti ku qoran Isbaanishka. Lagu soo dejisan karo PDF, Epub, iwm Waxay ku jirtaa http://godot-doc-en-espanol.readthedocs.io/es/latest/
Hadda waan ogaaday, aad baad ugu mahadsantahay tilmaanta!
Nooca '2.2 alfa' hadda waa la rakibi karaa, taas oo keeneysa horumarinno xiiso leh iyo bugfixes. Waan tijaabiyey waana xasilloon tahay. Wax walba waa caadi.
Aad u xiiso badan, waa inaan faafinaa warkan si aan u aragno hadii aan ku dhiirigelino barnaamijyada inay adeegsadaan aalado barnaamijyo u sameeya bug kasta oo xisaabiya.
Kaliya taageerada maqan ee loo yaqaan 'pibol'.
Kajawaab Asalka iyo Bilaashka Malagueños
Ciyaar Fan dijo
Maqaalka ugu xiisaha badan. Waxaan ku soo maray google iyo runta oo ahayd mid waxtar badan leh. Waxaan u arkaa mawduuca adduunka ee ciyaaraha fiidiyowga iyo abuuritaankiisa mid xiiso leh.
Waxaan rajeyneynaa inaad si qoto dheer ugu dhex geli karto mowduuca maqaalada mustaqbalka!
Jawaab Game Fan
Ciid wanaagsan iyo mahadsanid mudan